Ny Herinandro Tao Bahrain (03/2006) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Septambra 2017 5:19 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Marsa taona 2006 no nivoaka ny lahatsoratra tamin'ny teny Anglisy)
Mibahana ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Bahrainita tamin'ity herinandro ity ny kolontsaina sy ny zava-kanto, na dia teo aza ny hetsika fandraisana anjara amin'ny Bahrain International Circuit, izay nampiantranoan'ny fanjakana ny Bahrain Grand Prix tamin'ny 12 Martsa. Raha nisafidy hividy tapakila 10 amin'ny fampisehoana amin'ny vidin'ny tapakila Loka Lehibe iray i Mahmood Al Yousif , i Silly Bahraini Girl kosa nifoha tamin'ny 6 maraina mba hijery ny hetsika ao amin'ny efitra fandraisam-bahininy ao Ontario, Canada.
Mahmood & Co. kosa nankafy Jazz sy mozika amin'ny alina. SBG indray namonjy ny fampisehoan'ny Lord of the Dance! Mandritra izany fotoana izany, Ali Al Saeed manohy mandefa lahatsoratra momba ny fivoaran'ny tetikasa vaovao iasany amin'izao fotoana izao. Models of Success indray hivoaka ao Bahrain amin'ny 19 Martsa. Bahraini in Alaska kosa mandihy ny feon-kiran’ny tariky ny zanany lahy any an-tsekoly farany!
Ankoatra ny zavakanto, Haitham Sabbah sy Silly Bahraini Girl niresaka momba ny tatitra mikasika ny zon'olombelona navoakan'ny Departemantam-panjakana Amerikana, tamin'ny fomba fijery hafa. Sabbah indray nanontany momba ny politikan'ny zon'olombelona Amerikana, SBG kosa nanasongadina ireo fanitsakitsahana zon'olombelona sasany voarakitra ao Bahrain araka ny nasongadin'ny tatitra.
Namoaka ny vaovao momba ny fanakanana ny Tenin'i Rachel nahazo dera marobe sy nandrasana hatry ny ela ihany koa i Sabbah ary manasongadina ireo loza vao haingana tao Palestina, mitaky fandraisana andraikitra bebe kokoa mba hanatsaharana ny fandatsahan-drà.
Tamin'ny raharaha hafa, manintona ny saintsika mikasika ny fitomboan'ny fankahalana Silamo izay mamely mafy ny Tandrefana i Sabbah. Raha tsy izany rehetra izany, matahotra an'ireo pelaka any Holandy mety handroaka azy ireo ihany koa ireo fondamantalista!
Miverina any Bahrain sy amin'ilay bilaogera Bahrainita hafa, Dr Abdul Hadi Khalaf, izay nanoratra avy any Soeda momba ny olana ao an-toerana. Ato ny fanehoan-keviny momba ny fanavaozana ao amin'ny fanjakana, izay navoakan'ny Arab Reform Bulletin.
Ny farany fa tsy ny kely indrindra dia ilay bilaoera Amerikana, Tooners, izay manambady Bahrainita, ary mitantara amintsika ny zavatra niainany mampihetsi-po tamin'ny fihaonana tamina vehivavy Irakiana tao amin'ny toerana fanaovana fanatanjahantena - mampahatsiahy antsika indray fa tsy mahasalama ny fankahalana !